Rabshadihii Koonfur Afrika oo sahlay in dhac loo geysto 500 Dukaan oo Soomaalida leedahay (MAQAL) – Radio Daljir
Seteembar 19, 2013 5:41 b 0
Port Elizabeth, September 19, 2013 – Boobka iyo bur-burinta hantida Soomaalida ku ganacsatada dalka Koonfur Afrika ayaa la soo sheegayaa in ay sii kordhayso, xili dhowaan la gubay ganacsi badan oo Soomaalidu ku haysatay magaalada Port Elizabeth.
Rabshadihii ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa in ka badan 500 o dukaan oo Soomaalidu ku lahaayeen tuulooyinka ku dhow magaalada Port Elizabeth, waxaa loo gaystay boob iyo dab la qabadisiiyey dukaanada intooda badan.
Rabshadaha ka dhacay koonfur Afrika ayaa khasaare badan ay soomaalidu kala kulmeen, waxaana intii rabshaduhu socdeen la sheegay in halkaas lagu dilay mid ka mid ah dhalinta ganacsatada Soomaalida ah ee degan tuulooyinka.
Khatarta iyo cabsida ayaa la sheegayaa in ay tahay mid markasta sii kordhaysa, waxaana jira Soomaali badan oo dadaal ugu jira in ay bad-baadiyaan ganacsiga ay ku leeyihiin tuulooyinka, maadama ay ciidanku booliska wax ka qaban waayeen sugida amaanka.
DHEGEYSO:- Adna Aways oo daljir ka tirsan ayaa waraysatay ganacsade Axmed Cabdirixiin sheikh